कैलाश विकास बैंक र नेपाल मेडिसिटी अस्पतालबिच सम्झौता
बैंकिङ खबर । कैलाश विकास बैंक र नेपाल मेडिसिटी अस्पताल विच स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौता पत्रमा बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमृत चरण श्रेष्ठ र अस्पतालका तर्फबाट महाप्रबन्धक बिजय रिमालले हस्ताक्षर गरेका हुन् । उक्त सम्झौता पश्चात नेपाल मेडिसिटी अस्पतालले बैंकका सम्पूर्ण भिसाकार्ड भएका ग्राहकवर्ग तथा कर्मचारीहरुलाई उपचार खर्चमा आकर्षक छुट
बैंकिङ खबर । मुक्तिनाथ विकास बैंकले ललितपुरको कुपण्डोलमा नयाँ शाखा विस्तार गरेको छ । नयाँ शाखाको उद्घाटन ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले गरे । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रद्युमन पोखरेलले बैंकको वर्तमान अवस्था र सेवा विस्तारमा बैंकले लिने भावी रणनीतिको बारेमा जानकारी गराए । बैंकले लिएको समावेशी वित्तीय पहुँच विस्तारलाई अझै विस्तार गरी लघु उद्यम तथा
रुपन्देहीको भैरहवा अदालतमा मेगा बैंकको एक्सटेन्सन काउन्टर
बैंकिङ खबर । मेगा बैंक नेपालले रुपन्देही जिल्लाको भैरहवा स्थित अदालतमा एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीले एक समारोहका बीच एक्सटेन्सन काउन्टरको उद्घाटन गरे । बैंकको एक्सटेन्सन काउन्टरको संख्या १९ पुगेको छ । अन्य सरकारी कार्यालयहरुमा पनि यसरी नै एक्सटेन्सन काउन्टर विस्तार गरी सेवा सुविधा प्रदान गर्न मेगा बैंकको योजना
कामना सेवा विकास बैंकको नयाँ शाखा मोरङको उर्लाबारीमा
बैंकिङ खबर । कामना सेवा विकास बैंकले प्रदेश नं १ कोमोरङ जिल्ला, उर्लाबारी नगरपालिका वडा नं ०७ मा नयाँ शाखा विस्तार गरेको छ । बैंकका संचालक बलराम बराल तथा कामु. प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविण बस्नेतले संयुत्त रुपमा कारोबार शुभारम्भ गरे । कार्यक्रममा कामु. प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले उक्त शाखा प्रदेश नम्बर १ को लागि पहिलोे भएको
तिनाउ विकास बैंकको नाफा ४ करोडमाथि
बैंकिङ खबर । तिनाउ विकास बैंकले आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को दोस्रो त्रैमासमा खुद मुनाफा ४ करोड ७ लाख रुपैयाँ कमाएको छ । जुन गत वर्षको सोहि अवधिको तुलनामा १.९४ प्रतिशतले वृद्धि गरेको हो । गत वर्षको सोहि अवधिमा ३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । बैंकले ५ अर्ब १७ करोड ३८ लाख रुपैयाँ
साफाद्धारा सम्मानित सिटिजन्स बैंक
बैंकिङ खबर । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडलाई साउथ एशियन फेडरेशन अफ एकाउण्टेन्सले (साफा) भारतको पुणेमा सम्मानित गरेको छ । भारतको पुणेमा आयोजित समारोहमा बैंकलाई साफा बेस्ट प्रेजेन्टेड एनुअल रिपोर्ट अवार्ड २०१७ प्रदान गरिएको हो । " Private Sector Banks (Including Cooperatives Banks) विधामा बैंकले Certificate of Merit प्राप्त गरेको छ । सार्क क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका
प्रभु बैंकको नाफामा ७० प्रतिशतको बृद्धि
बैंकिङ खबर । प्रभुु बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५ ७६को ६ महिनामा ७० प्रतिशत नाफा बढाएको छ । चालु वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा बैंकको नाफा १ अर्ब ८ करोड पुगेको छ । ८ अर्ब २३ करोड चुक्ता पुँजी भएको बैंकको जगेडाकोषमा ५ अर्ब ६० करोड रहेको छ । यो रकम अघिल्लो बर्षमा ४ अर्ब ८५ करोड
कृषि विकास बैंकको सौराहा शाखाले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको राजस्व संकलन गर्ने
बैंकिङ खबर । कृषि विकास बैंकको सौराहा शाखाले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट उठ्ने राजस्व संकलन गर्ने भएको छ । सो कार्यको उद्घाट चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत बेद कुमार ढकाल र कृषि विकास बैंकको क्षेत्रिय कार्यालय बीरगञ्जका निर्देशक बाबुकाजी थापाले संयुक्त रुपमा गरे । सो अवसरमा प्रमुख संरक्षण अधिकृत बेद कुमार ढकालले निकुञ्जबाट उठ्ने राजस्व
किन घटेन ऋणको व्याजदर ?
बैंकिङ खबर। केही साताअघि बैंकहरुले सर्वसाधारणलाई निक्षेपमा दिने ब्याजदरको अधिकतम सीमा घटाए। ब्याजको आधार दरमा गणना गरिँदै आएको सम्पत्तिमा प्रतिफलबापत् ०. ७५ प्रतिशत जोड्न नपर्ने व्यवस्था पनि गरियो। त्यस्तै स्प्रेड दर (बैंकले दिने र लिने औसत ब्याजको अन्तर)लाई वाणिज्य बैंकले चैत मसान्तसम्म ४. ७५ प्रतिशतमा झार्नुपर्नेगरी मुद्रा तथा पुँजी बजार समस्या समाधान समितिले सुझाव दियो।
सिर्जना फाइनान्सद्धारा स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न
बैंकिङ खबर । सिर्जना फाईनान्सले सप्तरी जिल्लाको कञ्चनरुप नगरपालिकामा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको छ । नोवेल अस्पताल बिराटनगरका विशेषज्ञ डाक्टरहरुको सहभागितामा सम्पन्न भएको शिविरमा करिब १५ सय बिरामीले स्वास्थ्य परिक्षण गराएका थिए । कञ्चनरुप नगरपालिका प्रमुख वसन्त मिश्रले विशेषज्ञ डाक्टरहरुलाई स्वागत गर्दे यस किसिमका कार्यक्रमहरु नियमित रुपमा सञ्चालन गरेमा स्थानियवासिले राहत पाउने विश्वास व्यक्त
ज्योति विकास बैंकको दोस्रो त्रैमासको नाफा बृद्धि
बैंकिङ खबर । ज्योति विकास बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७५७६ को दोस्रो त्रैमासमा खुद मुनाफामा १७ करोड ४ लाख रुपैयाँ कमाएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको सोहि अवधिको तुलनाभन्दा १७.६० प्रतिशतले वृद्धि हो । अघिल्लो वर्षको सोहि अवधिमा बैंकले १४ करोड २५ लाख रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको थियो । २ अर्ब ५९ करोड ३६ लाख
वित्तीय साक्षरता र उद्यमशिलता विकासका लागि एक्सपो महत्वपूर्ण
बैंकिङ खबर। माघ ११ र १२ गते बुटवलमा आयोजना गरिएको बैंकिङ / बीमा तथा पूँजीबाजर एक्सपोबाट वित्तीय साक्षरताको विकास हुने विश्वास नियामक निकायहरुले गरेका छन् । देशभर वित्तीय सचेतना र बीमा साक्षरता फैलाउने उद्देश्यले आयोजना गर्न लागिएको एक्सपोमा नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति, नेपाल धितोपत्र वोर्ड, वाणिज्य बैंकहरु, विकास बैंक, बीमा कम्पनी, वित्त कम्पनी, मर्चेन्ट
कहाँ हराए १, २, २५ र २५० का नोट ?
बैंकिङ खबर। हाल १, २, २५ र २५० रुपैयाँका नोट चलनचल्तीमा पाइँदैन। यी नोटहरु पहिले चलनचल्तीमा रहेका थिए। केही वर्षयता यी नोटको छपाई राष्ट्र बैंकले बन्द गरेको छ। चलनचल्तीमा रहँदा धेरै यस्ता नोट खिचेर राष्ट् बैंकले नै व्यवस्थापन गर्यो। राष्ट्र बैंकमा गइसकेपछि यी नोट बाहिर पुनः सर्कुलरमा आउन पाएनन्। चलनचल्तीबाट यी नोट हटाउने उद्देश्यले नै
सिद्धार्थ बैंकको नाफा बढ्दा प्रति सेयर आम्दानी २५ रुपैयाँ
बैंकिङ खबर। सिद्धार्थ बैंकले चालु आर्थिक बर्षको दोस्रो त्रैमासमा ८७ करोड ५ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा कमाएको छ । गत वर्षको दोस्रो त्रैमासमा बैंकले ७१ करोड ७४ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । यस वर्ष १५ करोड बढि नाफा कमाउन सफल भएको हो । निक्षेप तथा कर्जा बैंकले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा १ खर्ब
बैंकिङ खबर । ओम डेभलपमेन्ट बैंक र पोखरा विश्वविद्यालयबीच सम्झौता भएको छ । मानव संसाधन लगायत विद्यार्थीहरुलाई अध्ययन अनुसन्धानमा आबश्यक पर्ने वित्तीय लगायत विविध विषयहरुमा सहयोग गर्ने गराउने उद्देश्यले सम्झौता भएको हो । सम्झौतापत्रमा बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विश्वमोहन अधिकारी तथास्कुल विश्वविद्यालयको तर्फकाट डा. रबिन्द्र घिमिरेले हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौतापत्रमा बैंकलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति व्यबस्थापनमा